पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) पहिलो दल हुने बताउनुभएको छ । उत्तरी रसुवाको आमा छोदिङ्मो गाउँपालिकास्तरीय उक्त दलको प्रथम सम्मेलन आइतबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले अहिले यो दल दुप्लाएको जस्तो देखिए पनि आगामी निर्वाचनमा विसं २०६४ कै अवस्थामा फर्कने बताउनुभएको हो ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, संयुक्तअधिराज्य बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु गरेको छ । सरकारले भारतका लागि डा. शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीलाई राजदूतमा प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि संसदमा पठाएको हो । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतले आफ्नो अनुभव, योग्यता, क्षमता, सोंच र अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहुने...
सर्वोच्चमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
सर्वोच्च अदालतमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चमा सोमबार नौ इजलास तोकिएको छ । गोलाप्रथाबाट दुई एकलसहित सात संयुक्त इजलास गठन भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
दीपा चाैधरी मंसिर २०, २०७८ सोमबार
नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने दुई वटा सुन कछुवासहित एक साताको अन्तरालमा छ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उक्त कछुवासहित पक्राउ परेकाहरुले काठमाडौंमा सुनकछुवा कसरी ल्याए ? सुनकछुवा कहाँबाट आए ? किन बेच्न खोजिदैछ ? यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिवराम थापाले बताउनुभयो ।